Mustafa Maxamed Macalin - Wikipedia
Mustafa Maxamed Macalin
Mustafa Maxamed Macalin wuxuu ka mid ahaa duuliyaashii ugu horeeyay ee soomaaliya yeelato. Mustaf wuxuu dhashtay 15 Maarso 1943 ilaa waqtigi oo dhintay 27 Diseembar 2009.
Taariikh nololeed[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Mustaf asigoo 17jir ah, oo noqday duuliyaasha diyaaradaha weerarka, wuxuuna ka qeebgalay ciidanka cirka ee militariga Soomaaliya. Mustaf wuxuu militariga ku jiray 1960kii ilaa 1978dii, kadibneh wuxuu isku bedelay duuliyaha diyaaradaha diyaaraha rakaabka 1979 ilaa 1991. Mustaf wuxuu ku dhashtay Muqdisho, aabihiis wuxuu ahaa dhakhtar, hooyadiis neh guri joogto. Mustaf marka oo caruur ahaa, wuxuu sawiri jiray diyaaradaha, wuxuu aad u jeclaa in oo noqdo duuliye.
Militariga[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Wuxuuna ku barbaaray magaalooyinka Muqdisho (Xamar),Baydhabo, Afgooye iyo Beledweyne.1960kii ayuu dhameystay waxbarashiida Collegio Magistrale. Ka dibna wuxuu ka mid noqday Duuliyayaashii uugu horeeyey ee loo qaatay Ciidamada Cirka Soomaaliyeed. Isagoo sanadku markuu ahaa 1961kii, halkaasoo uu ka mid ahaa duuliyayaashii markaa loo diray dalka Masar. Ka dibna uu aaday waxbarashiida Akaadeemiyada Almatta iyo Furunze ee Midowga Soofiyeetiga.
Tababarkaana wuxuu ku soo dhameystay (SCUOLA AVANZATO BASE ELICA) oo ku taala magaalada Latina ee dalka Talyaaniga. Sanadku markuu ahaa 1972kii waxaa loo diray dalka Midowga Soofiyeetiga halkaasoo uu ku soo bartay diyaarada BOMBER IL 28. 1973kii waxaa loo magacaabay taliyaha Raxanta Bomberka. Ka dibna halkaasoo loogu magacaabay taliyaha ciidanka Cirka ee gobolka Woqooyi Galbeed.
Sanadka markuu ahaa 1979 waxaa loo wareejiyey Sharikada diyaaradaha Somali Airlines codsi ka yimid Madaxtooyada Dalka. Halkaasoo uu ku bilaabay Duulimaadka Diyaaradaha FOKKER F27, isagoo markaa lagu qaatay Duuliye Sare- (Captain Pilot). Ka dib sanadka markuu ahaa 1982kii wuxuu waxbarasho u aaday dalka Maraykanka , Gobolka Texas, isagoo wax ka bartay American Air Academy; halkaasoo ku bartey diyaaraha rakaabka BOEING 707. Kana qaatay(FAA) shahaadooyinka sare ee dhinaca Duulimaadka (ATPL) Airline Transport Pilot License.
Sanadku markuu ahaa 1988kii wuxuu waxbarasho u tagay dalka Faransiiska Magaalada Tulouse, halkaasuu uu ku soo qaatay Tababarka Duulista Diyaaradaha AIRBUS A300-310. Wuxuuna ku duulay nooca diyaaradaa laga bilaabo 1988 ilaa iyo 1991. Sanadkii 1985 ilaa 1990kii wuxuu wax ka bartay Jaamicada Ummada Soomaaliyeed (J.U.S.) Kulliyada Qaanuunka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mustafa_Maxamed_Macalin&oldid=143669"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:42, 28 May 2015.